နုိုဗယ်ဆုမှ တယ်လီနောသုို့ နော်ဝေ-မြန်မာဆက်ဆံရေး ~ Htet Aung Kyaw
10:44 PM Htet Aung Kyaw No comments
(ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်။ ၂၀၁၄။)
နော်ဝေးဘုရင်မင်းမြတ်နဲ့ ၀န်ကြီးတွေ၊ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပါဝင်တဲ့ ကုိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကြီးတခု ဒီသတင်း ပတ်အတွင်း မြန်မာနုိုင်ငံ ဆီရောက်နေပါတယ်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်၊ အတုိုက်ခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အပြင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဘွဲနှင်းသဘင်ခန်းမမှာလး နော်ဝေးဘုရင်က မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ ထဲထဲဝင်ဝင်ကူညီပေးနေတဲ့ နော်ဝေးအစိုးရဟာ ကျေးလက်ဒေသ လျှပ်စစ်မီးရရှိ ရေး၊ လူငယ်တွေအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာသင်ဆုပေးရေးတွေကိုပါ ထပ်ကူညီပေးမယ်လို့ နော်ဝေးဘုရင်က ပြောပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပုဂံဖက်က ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်ထိမ်းသိမ်းရေးကိစ္စ၊ အင်းလေးကန်ဖက်က သဘာဝ ပတ် ၀န်းကျင်ထိမ်းသိမ်းရေးကိစ္စတွေကိုလဲ နော်ဝေးဖက်က ကူညီဖုို့ရှိနေပါတယ်။
မြန်မာနုိုင်ငံဆီတကူးတကာ့လာပြီး ဒီလုိုအကူညီပေးနေတဲ့ နော်ဝေးအစိုးရဟာ နော်ဝေးမှာရောက်နေတဲ့ မြန်မာတွေ ကုိုကော ဘယ်လိုများအကူညီပေးထားပါသလဲ။ မုိုင်ပေါင်း ၅၀၀၀ ကျော်ဝေးတဲ့ ဟုိုး-မြောက်ဝင်ရုိုးစွန်းနားက ရေခဲ တွေဖုံးလွမ်းနေတဲ့နုိုင်ငံဆီ မြန်မာနုိုင်ငံသား ၃၀၀၀ ကျော် ဘယ်လိုရောက်သွားတာလဲ။
ဘာကြောင့် နော်ဝေး ရောက်သွားကြတာလဲ
အမှန်တုိုင်းဝန်ခံရရင် နော်ဝေးကိုရောက်နေတာ ၁၅ နှစ်ခန့်ရှိနေပြီဖြစ်ပေမယ့် ဒီလုိုနေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ဘယ်တုန်း ကမှ စိတ်ကူးမယဉ်ခဲ့ဖူးပါ။ ကျနော်တုို့ကျောင်းသားဘ၀က နုိုင်ငံခြားထွက် ပညာသင်ဖုို့စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့တာက အင်္ဂ လန်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမဏီ၊ အမေရိကန်၊ ဂျပန်ပေါ့။
ဒါပေမယ့် တကယ်တန်းရောက်မဲ့ရောက်တော့ တခါမှ စိတ်မကူးခဲ့ဖူးတဲ့ နော်ဝေး။ သေချာတာကတော့ ရှေ့မှာပြော ခဲ့သလုို ကျောင်းသားဘ၀နဲ့ ပညာတော်သင်ဖုို့ရောက်သွားခြင်း မဟုတ်ပါ။ ကျောင်းသားဘ၀မှာ သမုိုင်းပေးတာဝန် အရ ၀င်ပါခဲ့ဖူးတဲ့ ၁၉၈၈ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီး ဖြိုခွဲခံရမှုနောက်ဆက်တွဲ ရလာဒ်တခုအနေနဲ့ ရောက်သွား တာမျိုးသာဖြစ်ပါတယ်။
သေနတ်နဲ့ ပစ်နေသူတွေကို ငါးစပ်နဲ့အော်ပြီး ဆန္ဒပြနေလုို့ကတော့ ထပ်သေဖုို့ပဲရှိတယ်။ ဒါးဒါး ချင်း၊ လှံလှံခြင်း တုန့်ပြန်မှရမယ်ဆုိုတဲ့ စိတ်ကူးတွေနဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေ ထောင်နဲ့ချီပြီး လက်နက်ကုိုင်တော် လှန်ရေးလုပ်ဖို့ တောခုိုခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်သားတပ်မတော် ABSDF ဆုိုတာကုိုဖွဲ့စည်းပြိး စစ်အစိုးရတပ်တွေကို ပြန်လည် တုိုက်ခုိုက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တောထဲကတကယ့်အခြေတွေ၊ စစ်မြေပြင်အခြေနေတွေဟာ တက္ကသုိုလ်စာသင်ခန်းထဲမှာ စိတ်ကူး ခဲ့သလုိုမဟုတ်။ ငှက်ဖျားကြောင့်သေဆုံးသူ၊ တုိုက်ပွဲမှာကျဆုံးသူများတဲ့အပြင် နုိုင်ငံတကာဖက်ကလည်း စစ်ရေး အရ ဘာမှအကူညီ မပေးခဲ့ပါ။ ဒီကြားထဲ နယ်မြေခံ တုိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်တွေနဲ့ ဗမာအများစုပါဝင်တဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော်အကြား ဆက်ဆံရေးကလဲ သိပ်မပြေလည်လှပါ။
ဒီလုိုနဲ့ ဆယ်စုနှစ်တခုဝန်းကျင်ကြာပြီးတဲ့အခါမှာတော့ တောခုိုကျောင်းသားဟောင်းအတော်များများဟာ ဒုက္ခသည် ဘ၀နဲ့ တတိယ နုိုင်ငံတွေဆီထွက်ခွာရေးဖက် ခြေဦးလှည့်လာရပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေကို အများဆုံးခေါ်ယူ တဲ့နုိုင်ငံတွေက အမေရိကန်၊ ကနေဒါနဲ့ သြစတေလျတုို့ဖြစ်ပေမဲ့ ၂၀၀၁ ခုနှစ် နောက်ပုိုင်းမှာတော့ နော်ဝေး၊ ဆွီဒင်၊ ဒိန်းမတ်၊ နယ်သာလန်အပါဝင် ဥရောပ နုိုင်ငံတွေကလဲ အတော်များများခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။
ဒုက္ခသည် ဆုိုတာကုို မြန်မာအတော်များများ နားလည်မှုလွဲနေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ၀န်ကြီးတွေ၊ လွှတ်တော်အမတ်တွေပါ ပါဝင်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ် သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့အဖွဲ့ နော်ဝေးရောက်လာစဉ်က ဆုိုရင် “ဒီနုိုင်ငံမှာ မြန်မာဒုက္ခသည် ဦးရေဘယ်လောက်ရှိလဲ” ဆုိုပြီး ၀န်ကြီးတွေက မေးပါတယ်။
ဒုက္ခသည် (Refugee) ဆုိုတာဟာ နယ်စပ်ကစခန်းတွေ၊ တနည်းအားဖြင့် အခြားနုိုင်ငံတခုခုက လက်မခံသေးခင် အထိသာ ဒုက္ခသည်အဖြစ်ခေါ်ဝေါပြီး နုိုင်ငံတခုခုကလက်ခံပြီးသွားရင် ဒီလူတွေဟာ ဒုက္ခသည်မဟုတ်တော့ပါ။ သာမန်နုိုင်ငံသားတဦးဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ။ ဒါကြောင့် နော်ဝေးမှာ မြန်မာဒုက္ခသည်တဦးမှမရှိပါ။ ဒုက္ခသည်ဟောင်းတွေ ပဲရှိပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂက ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စာရင်းအရဆုိုရင် တမ္ဘာလုံးမှာ ဒုက္ခသည်ဦးရေ ၅၁ သန်းရှိပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ မြန်မာ-ထုိုင်းနယ်စပ်၊ မြန်မာ-တရုတ်နယ်စပ်၊ မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်နဲ့တော တောင်တွေထဲပုန်းအောင်း နေရတဲ့ မြန်မာနုိုင်ငံသား ၅ သိန်းဝန်းကျင် ပါဝင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီကတဆင့် တတိယ နုိုင်ငံတွေဆီရောက်သွားပြီးရင်တော့ ဒီလူတွေကို ဒုက္ခသည်အဖြစ် ဆက်မခေါ် တော့ပါ။ ဘယ်ကမှလည်း အထောက်အပံ့ မပေးတော့ပါ။ သာမန်နုိုင်ငံသားတဦး ဖြစ်သွားပြီမုို့ သူ့ဘ၀သူကျောင်း ပေတော့။
နော်ဝေ-မြန်မာ ဆက်ဆံမှု နောက်ခံသမုိုင်း
နော်ဝေး-မြန်မာ ဆက်ဆံရေးကိုပြောမယ်ဆုိုရင် နုိုဗယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုနဲ့ DVB ဒီမုိုကရက်တစ် မြန်မာ့အသံကုို ချန်ထားလုို့မရပါ။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကုို နော်ဝေးနုိုင်ငံက နုိုဗယ်ဆုပေးပါတယ်။ အဲဒီဆုပေးပွဲ ဆီတက်လာတဲ့ အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစုိုးရ NCGUB ၀န်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာစိန်ဝင်းနဲ့ အဖွဲ့ကုို အသံလွှင့် ဌာန တခုတည်ထောင်းပေးလုိုက်ရာကနေ DVB ရေဒီယိုပေါ်လာပါတယ်။
အဲဒီနောက် ထုိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်တကျောရှိ ဒီမုိုကရေစီအင်အားစုတွေကို နော်ဝေးအစိုးရက အင်တုိုက်အားတုိုက် ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂၀၀၈ ခုနှစ် နာဂစ်မုန်တုိုင်းဖြစ်ပြီးနောက်ပုိုင်း နော်ဝေးအကူညီပေးရေးအဖွဲ့တွေကို မြန်မာနုိုင်ငံအတွင်း ၀င်ခွင့်ပြုလုိုက်တဲ့အခါမှာတော့ နယ်စပ်အပြင် ပြည်တွင်းမျာလဲ အကူညီပေးဖုို့ အများ ကြီးလိုနေ တယ်ဆုိုတာကို နော်ဝေးတွေသိသွားပါတယ်။
ဒီလုိုနဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ စစ်တပုိုင်းအစိုးရတက်လာတဲ့အခါမှာတော့ ပြည်တွင်းအကူ ညီပေး ရေးဖက် လုံးဝ အားစုိုက်ဆောင်ရွက်ပါတော့တယ်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မျာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ နုိုဗယ်ဆုရှင်ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်တုို့ကို နော်ဝေးနုိုင်ငံဆီဖိတ်ကြားပြီး အကူညီပေးရေးကိစ္စတွေ ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
ကြွေးဟောင်းခရိုနာ ၃ ဘီလီယံ (အမေရိ ကန် ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၅၄၀ ခန့်) ကို နော်ဝေအစိုးရက လျှော်ပေးလိုက် ပါတယ်။ ပြီးတော့ မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေး စင်တာ MPC အပါဝင် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်၊ မြေမြှုပ်မုိုင်း ပပျောက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေတွက် အင်တုိုက်အားတုိုက် ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ လက်အောက်မှတဆင့် သန်းကောင်စာရင်းနဲ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကိစ္စတွေကိုလဲကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီလုိုအကူညီပေးမှုတွေနဲ့တပြိုင်တည်း အခု စာဖတ်သူတွေသုံးစွဲနေကြတဲ့ တယ်လီနော တယ်လီဖုန်းကုို ၀န်ဆောင် မှုပေးနေတဲ့ နော်ဝေ ဆက်သွယ်ရေးကုပ္ဗဏီကြီး မြန်မာနုိုင်ငံထဲရောက်လာတော့တာပေါ့။ အခုလဲ စီးပွားရေးကုပ္ဗဏီ ၃၅ ခုက ကုိုယ်စား လှယ်တွေပါလာတယ်ဆုိုတော့ နော်ဝေးရဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ မြန်မာမြေပေါ် ထပ်လာဦးမယ်ဆုို တာ သံသယ ရှိစရာမလိုပါ။
တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆုိုရင်တော့ ဒီနေ့ခေတ် နော်ဝေး-မြန်မာ ဆက်ဆံရေးဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ ကျော်ကလုို ဒီမုိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်ရေးအတွက်ချည်း ကူညီပေးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးမဟုတ်တော့။ စီးပွါးရေးအရပါ အပေးအယူ လုပ်လာတဲ့ ဆက်ဆံရေးခေတ်သစ်ကုိုရောက်လာနေပါပြီ။ နုိုဗယ်ဆုခေတ်ကနေ တယ်လီနောခေတ်ကုို ရောက်လာ နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
တလုံးတည်းဖြေရရင်တော့ “ရာသီဥတုကလွဲရင် အကုန်ကောင်းပါတယ်” လုို့ဖြေချင်ပါတယ်။ ဥပမာ မြန်မာနုိုင်ငံမှာ ကျောင်းမနေနုိုင်တဲ့ ကလေးတွေအများကြီး။ ဒီမှာ ဒါမျိုးမရှိစေရ။ ကလေးအားလုံး ကျောင်းတက်နုိုင်ဖို့အစုိုးရက စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။
တကယ်က အဲဒီကလေးတွေမမွေးခင် သူ့မိခင် ကုိုယ်ဝန်ဆောင်ကတည်းက လစာအပြည့်နဲ့ကလေးမွေးခွင့် ၈ လ ပေးထားပါတယ်။ အဖေဖြစ်သူကလဲ လစာအပြည့်နဲ့ ၂ လယူနုိုင်ပါသေးတယ်။ ပြီးတော့ မီဖွားစရိတ်၊ ဆေးရုံ စရိတ် အားလုံး အခမဲ့။ ဒီကလေး အသက် ၁၈ နှစ်မပြည့်မချင်း တလ ခရိုနာ ၁၀၀၀-နီးပါး သူ့အမေရဲ့ဘဏ်ထဲ အစိုးရက ထည့်ပေးပါသေးတယ်။
လူကြီးအခွင့်ရေးကလည်း ကလေးထက် သိပ်မနိမ့်။ ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ ဒုက္ခသည်အဖြစ် ဒီနုိုင်ငံ ဆီရောက်ခါစလူတွေ ကို မိတ်ဆက်အစီစဉ်အရ တလခရိုနာ ၁၀၀၀၀ (တသောင်း) ၀န်းကျင်ထောက်ပံ့ပေးပြိး ၂ နှစ်ခန့် နော်ဝေးစာသင် ပေးပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ အလုပ်ရှာ၊ ကုိုယ်ဘာသာ ရှာစားပေါ့။ ဒါပေမယ့် မတော်တဆ အလုပ်ပြုတ်သွားတယ်ဆုို ရင် လစာရဲ့ ၆၂ ရာခုိုင်နှုံးနဲ့ ၂ နှစ်စာ အလုပ်လက်မဲ့ခံစားခွင့်ပြန်ပေးပါတယ်။
မြန်မာတွေကြား အထူးအဆန်းဖြစ်နေတာကတော့ ဒီနုိုင်ငံမှာ လူတုိုင်းကုို အခမဲ့ဆေးဝါးကုသမှု ပေးထားခြင်းပါ။ ငွေမပေးနုိုင်လို့ ဆေးရုံကလက်မခံတာ၊ ငွေမရှိလုို့ ခွဲစိတ်မှုမလုပ်နုိုင်ပဲ အသက်အသေခံလုိုက်ရတယ်ဆုိုတာမျိုး ဒီမှာမရှိပါ။ တခါ အသက် ၆၇ နှစ်ကျော်သူတုိုင်းကုို သက်ပြည့်ပင်စင် ထောက်ပံ့ကြးပေးပါတယ်။ မြန်မာနုိုင်ငံမှာဆုို ရင် အစိုးရ၀န်ထမ်းဟောင်းတွေ တလ ၂-၃ သောင်းလောက်ပင်စင်ရတာကလွဲပြီး တခြားလူတွေ ရတယ်လို့ မကြားဖူးပါ။ ဒီနုိုင်ငံမှာကတော့ နုိုင်ငံသားတုိုင်းကုို သက်ပြည့်ပင်စင်ပေးပါတယ်။
နောက်ထပ်အထူးအဆန်းတခုကတော့ မသန်စွမ်းထောက်ပံ့ကြေး။ သူလဲ သက်ပြည့်ပင်စင်လုိုပဲ တသက်လုံး လစဉ် ပုံမှန်ပေးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် တောထဲမှာတုိုက်ပွဲဝင်ရင်း ထိခုိုက်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့ ကျနော်တုို့ ရဲဘော်ဟောင်း အတော်များများ ဒီနုိုင်ငံမှာ မသန်စွမ်းထောက်ပံ့ကြေး ရကြပါတယ်။
အခွင့်ရေးတွေအကြောင်းပြောနေတာကတော့ ဟုတ်ပါပြီ။ ဒီအခွင့်ရေးတွေရဖုို့အတွက် ဘာတွေပေးဆပ်ဖုို့လုိုသလဲ။ ဒီမေးခွန်းက အတော်အရေးကြီးပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆုိုရင် ပွင့်လင်းစမြန်မာနုိုင်ငံကလူတွေဟာ အခွင့်ရေးပဲ တောင်းနေကြပြီး တာဝန်ယူမှုအပုိုင်းမှာတော့ အားနည်းကြတယ်လို့ နုိုင်ငံရေးအကဲခတ်တွေက ဝေဖန်နေကြ လုို့ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်က နော်ဝေးလုို လူမှုဖူလုံရေးနုိုင်ငံတော် (Velferdsstaten) တခု ဖြစ်လာအောင် လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ဖုို့က မလွယ်ပါ။ ရပုိုင်ခွင့် (Rettighter) နဲ့ တာဝန် (Plikter) ကို လူတုိုင်းနားလည်ပြီး အသေချာလုိုက်နာမှ အလုပ်ဖြစ် တဲ့ စနစ်မျိုးပါ။
ဒီစနစ်အရ အလုပ်လုပ်နုိုင်သူတုိုင်း မပျက်မကွက်အလုပ်ဆင်းရပါ့မယ်။ လစာရဲ့ ၃၅ ရာခုိုင်နှုံးကျော်ကုို အစုိုးရဆီ အခွန်ဆောင်ရပါ့မယ်။ ပြီးတော့ ကုိုယ်ဈေးဝယ်တဲ့အခါတုိုင်း ၀ယ်သမျှတန်ဖုိုးထဲက ၂၅ ရာခုိုင်နှုံးကုို အစိုးရက အခွန်ဖြတ်ပါတယ်။ ဒါက သာမန်လူတုိုင်းလုိုက်နာရမဲ့ကိစ္စ။ တခြား ရေနံနဲ့သဘာဝ ဓတ်ငွေ့လုိုစီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတွေ၊ ကုပ္ဗဏီကြီး တွေဆီကလဲ အခွန်တွေအများကြီးဖြတ်ပါသေးတယ်။ ၀င်ငွေ၊ ထွက်ငွေ အားလုံးက ဘဏ်စနစ်နဲ့ သွားတာဆုိုတော့ ဘာမှ ငြင်းခုန်စရာမရှိ။ အားလုံး ထင်သာ မြင်သာရှိပါတယ်။
အလုပ်ရှိတဲ့လူက မရှိတဲ့လူကိုကူညီတဲ့သဘော။ ချမ်းသာတဲ့သူက ဆင်းရဲတဲ့သူကုိုမျှဝေတဲ့သဘောဆုိုတော့ မြန်မာ တွေရဲ့ ရုိုင်းပင်းကူညီမှုဓလေ့နဲ့တောင် တူနေမလားမသိပါ။ ဒါပေမယ့် မြန်မာတွေအလှူလုပ်သလုိုမျိုး စိတ်ပါတဲ့ အချိန်မှ ထလုပ်လုို့မရ။ စနစ်တခုအနေနဲ့ဖြစ်လာအောင် လူတွေရဲ့စိတ်ဓတ်တွေ၊ စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံတွေကို အ တော်လေး အချိန်ယူ လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ခဲ့ရပါတယ်။
ဒါကြောင့် နော်ဝေးဆီက အကူညီယူတဲ့အခါမှာမှာ လက်တလောအရေးပေါ်လုိုအပ်နေတဲ့ ရုပ်ဝတ္တုနဲ့ ငွေကြေးတွေ အပြင် အထက်ဖေါ်ပြပါ ရပုိုင်ခွင့်နဲ့ တာဝန် ၂ ခုတွဲပါတဲ့ စဉ်းစားပုံတွေကိုပါ ရအောင်ယူဖုို့လို်အပ်ပါတယ်။ လာဘ်စား ခြစားမှုတွေ၊ ခရုိုနီခရိုပြာကြီးစုိုးမှုတွေ၊ ပုိုင်ရာဆုိုင်ရာတွေအဆင်ပြေပြီး လူအများစုကြီး ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဘ၀က နေလွတ်မြောက်စေဖုို့အတွက် စစ်အာဏာရှင်စနစ်လက်ကျန်အတွေးအခေါ်တွေကုို စွန့်လွှတ်ဖုို့လုိုနေပါတယ်။
အဲဒီ ကတဆင့် ဒီမုိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်ရေးကို တန်းဖုိုးထားတဲ့၊ လူသားအချင်းချင်း တန်းတူညီမျှမှုကိုတန်ဖုိုးထားတဲ့၊ ချမ်း သာသူက ဆင်းရဲသူကုို ကူညီပေးနုိုင်တဲ့ စနစ်မျိုးအထိရောက်အောင်သွားနုိုင်တဲ့ စဉ်းစားပုံအကူညီကုိုပါ ရအောင်ယူ ဖုို့ လုိုအပ်နေပါကြောင်း တင်ပြလုိုက်ရပါတယ်။ ။
(ဒီဆောင်းပါးကို The Voice Daily က ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်နေ့ကတည်းက ဖေါ်ပြထားပေမဲ့ အွန်လုိုင်းပေါ်မတင် တာကြောင့် မသိလုိုက်ပါ။ အခုမှ ပြန်တင်ရခြင်းအတွက် စာဖတ်သူများအား တောင်းပန်ပါကြောင်း)။
နော်ဝေ-မြန်မာ ဆက်ဆံရေး... မှတ်တမ်းစိတ်ဝင်စားသူမှာ အလွယ်တကှူရှာနုိုင်အောင် အောက်ပါ လင့်ခ် ကိုပါ ပူးတွဲ ဖေါ်ပြအပ်ပါသည်...
Til Kongeparet. Fra Burmakomiteen
Publisert2desember 2014 - 641 visningerInnlegg
Kjære Kong Harald og Dronning Sonja,
I anledning statsbesøket til Burma (Myanmar) vil den Den norske Burmakomité (NBK) ønske Kongeparet hjertelig velkommen til et land hvor Norge siden 1992 har vært en sterk støttespiller for demokrati og menneskerettigheter. Kongeparet var selv tilstede da Daw Aung San Suu Kyi ble tildelt Nobels fredspris i 1991, hvor vi alle ble grepet av den da 18 år gamle Alexanders sterke tale på vegne av sin mor. Det norske engasjementet i Burma var en direkte konsekvens av fredsprisen, hvor NBK ble stiftet januar 1992 for å kanalisere midler til den burmesiske demokratibevegelsen. Et av våre første prosjekter var å bidra til etableringen av radiostasjonen Democratic Voice of Burma (DVB). DVB har i to tiår vært det liberale demokratiets stemme fra Oslo, på samme måte som "stemmen fra London" var frihetens stemme i vår egen krigstid. Parallelt støttet Norge og NBK den burmesiske eksilregjeringen, som hadde utspring i det frie valget i Burma i 1990, hvor National League for Democracy (NLD), ledet av Daw Aung San Suu Kyi, vant 80 prosent av setene i parlamentet. Som kjent ble valget underkjent av regimet, og en rekke politikere ble fengslet eller tvunget i eksil. Også her ser vi paralleller til vår egen historie. I Norge var Kong Haakons og Kronprins Olavs innsats fra eksil i England, kombinert med motstandskampen fra sivilsamfunn og hjemmefronten i Norge, svært viktig for kampen mot diktaturet, og kanskje enda viktigere for vår nasjonale identitetsbygging etter krigen. Demokratibevegelsen helter spiller en tilsvarende viktig rolle i Burma, og det er Nobelprisen og vår demokratistøtte som gjør at burmesere har et godt inntrykk av Norge. Denne rollen er det viktig å holde fast ved.
En hel verden lot seg begeistre da den burmesiske militærjuntaen i 2011 tok viktige skritt i demokratisk retning. Daw Aung San Suu Kyi ble løslatt i 2010, etter å ha tilbrakt mer enn 15 av de siste 20 årene i husarrest. I 2013 flyttet DVB fra Norge, og opererer nå fra Thailand og Burma. Det er viktig å anerkjenne viktige reformer den burmesiske regjeringen har gjennomført, men fire år inn i Thein Seins regjeringstid er det allikevel grunn til å spørre seg om reformene noen gang har hatt demokratiet som mål. Grunnloven er skrevet for å sikre militæret politisk makt, inkludert retten til statskupp. Grunnloven forhindrer Daw Aung San Suu Kyi å bli president. I 2014 har en rekke politiske opponenter og journalister blitt fengslet og militære angrep i etniske delstater har blusset opp, og behandlingen av etniske og religiøse minoriteter er under enhver kritikk. Diktaturer i Spania, Sør-Afrika og Argentina ble omformet til demokratier ved at militæret trakk seg ut av politikken. I Burma har man åpnet for økonomisk liberalisering, men holdt fast ved militærets politiske og økonomiske privilegier. Den politiske prosessen i Burma har nå kommet til et punkt hvor det er åpenbart at vestlige frie nasjoner må kombinere engasjementspolitikken med tydelig definerte forventninger til demokratisering. Daw Aung San Suu Kyi er selv tydelig på at den politiske reformprosessen Norge har vært den første vestlige nasjonen til å stille seg bak, ikke fører til et reelt demokrati. Dette er et tankekors vi håper Kongefamilien vil ta med seg inn i møtene med fredsprisvinner Daw Aung San Suu Kyi og de tidligere generalene U Thein Sein og Thura Shwe Mann.
Norge var først ute med å heve økonomiske sanksjoner og slette all burmesisk gjeld militærregimet hadde opparbeidet seg. Dette har gitt norske selskaper en unik posisjon, som forhåpentligvis vil påvirke positivt i forhold til overgangen fra en militær økonomi til markedsøkonomi. Et ansvarlig norsk næringsliv kan i stor grad kan bidra positivt i å bygge gode juridiske rammer rundt investeringene, og sette en etisk standard. Samtidig har ikke næringslivet mandat til å understøtte demokratiske reformer. I en kompleks verden hvor autokratiske stater liberaliserer økonomien uten å liberalisere politikken, er det viktigere enn noen gang at Norge står fast ved demokratiske prinsipper. I Burma bidrar den norske støtten i dag i større grad til å styrke en pro-militær regjering enn en demokratisk opposisjon. Norge har vært dyktige på å bygge relasjoner til representanter for et tidligere regime, men har samtidig støtt fra seg den demokratiske opposisjonen, inkludert Daw Aung San Suu Kyi. Norge har de siste årene utarbeidet en lojal politikk overfor den burmesiske regjeringen, både i vårt engasjement i fredsprosessen og i å dreie støtten til Burma i retning av økonomisk utvikling, helse og utdanning, på bekostning av den politiske opposisjonen og viktige stemmer innen et uavhengig og kritisk sivilsamfunn. Mens fredsprisvinneren er sterkt kritisk til den politikken Norge støtter, applauderer den burmesiske regjeringen og hærsjefen Norges engasjementspolitikk. Norge har på kort tid gått fra å være en sterk støttespiller for demokratibevegelsen og Daw Aung San Suu Kyi, til å bli en sterk støttespiller for president U Thein Sein og en regjering som ikke er demokratisk valgt. Det bør være et paradoks for et av verdens mest utviklede demokratier. Frem mot valget i 2015 er det avgjørende at Norge ikke kompromisser på burmesernes krav om et liberalt demokrati, og at våre næringsinteresser ikke kommer i veien for vår viktige rolle i å understøtte demokratisering.
I Burma kommer Kongeparet til å møte både demokratikampens helter, som har arbeidet for demokrati i mørke tiår, og betalt en høy pris for sin overbevisning, gjennom fengsling og husarrest, drap av sine nærmeste og adskillelse fra sin familie og venner. Vi er svært glade for at Kongefamilien vil møte Daw Aung San Suu Kyi, som gjennom sin kamp og sitt offer for demokratiet, er et forbilde for hele verden. I motsetning til andre frigjøringshelter, som Nelson Mandela, er fredsprisvinnerens politiske handlingsrom begrenset av de samme lederne som tidligere holdt henne innesperret. Kongen og Dronningen vil også møte flere av de fremste representantene for regimet. President U Then Sein var fungerende statsminister under de tragiske drapene på demonstrerende munker i 2007, den såkalte safranrevolusjonen, og var rangert som nummer fire i regimet. Ordfører i Underhuset, Thura Shwe Mann, var rangert som nummer tre. Dere vil møte personer som er delaktig i overgrep mot sivilbefolkningen gjennom mange år, og er en del av problemet. Samtidig er de en del av løsningen i Burma. Å skape en mer balansert politikk, som i større grad tar høyde for denne komplekse dynamikken, er svært viktig.
Norge og Burma har flere historiske berøringspunkter. Norske handelsskip har fraktet tømmer og ris helt tilbake til midten av 1800-tallet. Sjøfartsnasjonen Norge spilte til og med en viktig rolle i Burmas frigjøringskamp, enn noe tilfeldig. Aung San Suu Kyis far, Aung San, markerte seg på 1930-tallet som en skarp kritiker av britenes kolonistyre, og det ble utstedt en arrestordre. Aung San kom i sikkerhet takket være det norske skipet MS Hai Lee, som tilfeldigvis seilte fra Rangoon 7. august 1940. Skipet var bygget på Akers mekaniske verksted i 1934 og eid av drammensrederiet Brusgaard, Kiøsterud & co. Aung Sans plan var trolig å mobilisere kinesiske myndigheter i kampen for burmesisk selvstendighet, men det norske skipet gikk til Amoy (Xiamen), som var okkupert av japanerne, og Aung San inngikk en allianse med Japan i stedet. Burma ligger strategisk til mellom India og Kina, og japanerne drømte om kontroll over Burma Road, som slynger seg gjennom de nordlige delene av Burma. Japanerne lovte Aung San penger og militær trening til 30 unge burmesere, de såkalte 30 kameratene. Ne Win, som tok makten i et kupp i 1962, inngikk i denne gruppen. Februar 1941 seilte Aung San tilbake til Burma forkledt som en kinesisk sjømann, muligens også med MS Hai Lee. Ihvertfall passer det med anløpsdatoene til det norske skipet. De 30 kameratene vendte senere det fascistiske Japan ryggen, og samarbeidet med kolonimakten Storbritannia, som igjen førte til selvstendighet 4. februar 1948.
Et mindre kjent maritimt referansepunkt er at det tidligere hurtigruteskipet MS Kong Olav, omtalt som Kongeskipet, i mer enn 15 år har ligget i Burma, i Andamansjøen like ved den thailandske grensebyen, Ranong. Skipet var hurtigruteskip fra 1964 til 1978, og ble bygget ved Bergens Mekaniske Verksted i Solheimsviken utenfor Bergen, på oppdrag av Det Stavangerske Dampskibsselskab. Skipet ble døpt MS Kong Olav av Randi Gowart-Olsen, og sjøsatt 15. november 1963. Skipet målte 87,4 meter, og hadde en vekt på 2604 bruttoregistertonn. I maskinen stod en Aker lisensbygd 7-sylindret Burmeister & Wain-motor. I 1997 gikk MS Kong Olav på sin siste seilas, med Thailand som mål, og ligger i dag i Burma.
Vi ønsker Kongeparet velkommen til Burma. Kronprinsessen har tidligere besøkt landet, hvor hun blant annet møtte noen av NBKs partnere, og gjorde et svært godt inntrykk. Vi vil benytte anledningen til å understreke betydningen av at Norge igjen tar posisjonen som demokratiets fremste støttespiller i Burma. Norge er i en unik posisjon til dette, både med tanke på vår historiske rolle, vårt nettverk til en ikke-valgt regjering og gjennom næringssamarbeid. Da er det viktig å holde åpne de historiske båndene mellom demokratibevegelsen og Norge. Den norske Burmakomité har i 22 år vært et viktig bindeledd mellom Norge og Burma. De to neste årene er skjebnesvangre i burmesisk historie, med et planlagt valg og mulig maktovertagelse i 2015. Vi vil oppfordre Kongeparet til å bruke det kommende statsbesøket til å bygge bro til den demokratiske opposisjonen, som har kommet i skyggen av myndighetene i Naypyidaw de siste årene. Dette er noe vi håper Kongeparet tar med seg på Deres besøk i et av verdens vakreste, men også mest vanskjøttede land.
Audun Aagre, daglig leder i Den norske Burmakomité
 Under prisutdelingen av Nobelprisen desember 1991, gikk den norske regjeringen, ved daværende utenriksminister Thorvald Stoltenberg, ut med en åpen støtte til den burmesiske eksilregjeringen, som ble ledet av Dr. Sein Win, Daw Aung San Suu Kyis fetter. Siden da har Norge vært oppfattet av det internasjonale samfunnet som en sterk støttespiller for demokratisk utvikling i Burma.
နော်ဝေးဘုရင် ရန်ကုန်သွားစဉ်က ဂျာနယ်တုိုက်တခုဆီ ပုို့ခဲ့ပေမဲ့ ကြားချောင်ကျန်ခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးတပုဒ်ကိုလည်း မှတ်တမ်းအဖြစ် ပြန်လည်ဖေါ်ပြလုိုက်ပါတယ်။
နော်ဝေးဘုရင်ရဲ့ နေပြည်တော်ခရီးစဉ်က ဘာတွေထူးလာမလဲ
နော်ဝေးဘုရင်မင်းမြတ် Harald နဲ့ မိဘုရား Sonja တုို့ဟာ ပထမ ဆုံးအကြိမ်သမုိုင်းဝင်ခရီးစဉ်အဖြစ် မြန်မာနုိုင်ငံ ဆီ ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှာ ရောက်လာဖို့ ရှိနေပါတယ်။ နုိုဗယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုပေးတဲ့နုိုင်ငံ၊ ဒီမုိုကရေစီနဲ့ လူ့ အခွင့်ရေးကုိုအထူးလေးစားတဲ့နုိုင်ငံအဖြစ် လူသိများလှတဲ့ အနောက်ဥရောပနုိုင်ငံတခုရဲ့ ဘုရင်တပါးက စစ်တပ်ကြီး စိုးခဲ့၊ စစ်တပ်ကြီးစုိုးဆဲအဖြစ် နာမည်ကြီးနေတဲ့ အရှေ့တောင်အာရှက မြန်မာနုိုင်ငံဆီ အခုလုိုခရီးထွက်တာဟာ စိတ်ဝင်စားဘွယ်ဖြစ်နေပါတယ်။
၅ ရက်ကြာမဲ့ ဒီရီးစဉ်အတွင်း နေပြည်တော်မှာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံမဲ့အပြင် အတုိုက်ခံခေါင်းဆောင် နုိုဗယ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလဲ တွေ့လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ ဒါအပြင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာလဲ မိန့်ခွန်းပြောမယ်လုို့ဆုိုပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ ၂ နုိုင်ငံအကျိုးတူ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် နားလည်မှု စာချွန်လွှာတချို့ ရေးထုိုးမယ်လုို့လဲ သိရပါတယ်။
ထူးခြားတာကတော့ ဘုရင်မိသားစုနဲ့အတူ နုိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Børge Brende၊ ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီး Monica Mæland တုို့လုိုက်ပါမှာဖြစ်တဲ့အပြင် စီးပွါးရေးကုပ္ဗဏီ ၃၅ ခုက ကုိုယ်စားလှယ်တွေလဲ အတော်များများ ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီခရီးစဉ်ဟာ နော်ဝေးရဲ့ သင်္ကေတဖြစ်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတရား၊ ဒီမုိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်ရေးသဘောတရားမျှဝေဖုို့ထက် စီးပွါးရေးဖက်ကုိုများ ပုိုစောင်း ပေးသွားမလားဆုိုပြီး နော်ဝေး ရှိ မြန်မာအသိုင်းဝုိုင်းနဲ့ နော်ဝေ-မြန်မာ ကော်မီတီတုို့က စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။
‘’ဒီခရီးစဉ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က မြန်မာအစိုးရနဲ့ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတွေ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖုို့ဆုိုတာ ရှင်းနေပါတယ်။ စီးပွါးရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုက ဒီမုိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကုို ကူညီပေးနုိုင်မှာလား’’ ဆုိုပြီး နော်ဝေး-မြန်မာကော်မီတီ NBC မှ Audun Aagre က မေးခွန်းထုတ်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် နော်ဝေးအစိုးရရဲ့ မြန်မာနုိုင်ငံအပေါ်မူဝါဒဟာ လုံးဝ (U-turn) ဂငယ် ကွေ့ ကွေ့သွားပါတယ်။ ဒီမုိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကုို တပ်ဦးကနေ ဦးဆောင်ထောက်ခံအားပေးနေရကနေ (Non-elected) ရွေးကောက်ခံအစိုးရမဟုတ်တဲ့ လက်ရှိမြန်မာအစိုးရကို အင်တုိုက်အားတုိုက်ထောက်ခံရေးဖက် နော်ဝေးက လမ်းကြောင်းပြောင်းး သွားပါတယ်လုို့ သူကထောက်ပြပါတယ်။
ဒီအချက်တွေအပါဝင် သူတုို့ရဲ့တုိုက်တွန်းချက်စာတစောင်ကို နုိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက် နေ့စွဲနဲ့ နော်ဝေးဘုရင်မင်းမြတ် ဆီပေးပို့ထားတာကုိုလဲတွေ့ရပါတယ်။ အလားတူ နော်ဝေးရောက် မြန်မာအသုိုင်းအ၀ုိုင်းကလဲ နုိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက် နေ့စွဲနဲ့ ဘုရင်းမင်းမြတ်ဆီ စာတစောင်ပေးပုို့ထားပါတယ်။
မြန်မာအဖွဲ့ရဲ့စာထဲမှာတော့ ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကဖြစ်ပွါးခဲ့တဲ့ ကချင်ပြည်နယ် လွိုင်ဇာမြို့က သင်တန်းကျောင်း အပေါ် အစိုးရတပ်ရဲ့ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ပြန်လည်တင်းမာလာနေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအခြေနေ၊ ပြည်တွင်းဒေသ အတော်များများက ဘာသာရေးနဲ့ လူမျိုးရေးမငြိမ်မသက်မှုတွေ၊ စစ်တပ်နဲ့ ခရိုနီတွေက အဓမ္မသိမ်းထားတဲ့မြေ ယာတွေကို လယ်သမားတွေဆီပြန်မပေးလုို့ တင်းမာလာနေတဲ့ အခြေနေ၊ ကျောင်းသားတွေရဲ့ ပညာရေးလွတ် လပ်ခွင့်ဆန္ဒပြမှုတွေကိုထောက်ပြထားပြီး ဒါတွေကို အင်အားမသုံးပဲ ငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းပေးရေး မြန်မာအစိုးရကုို နော်ဝေးဘုရင်ဖက်က တုိုက်တွန်းပေးဖုို့ တောင်းဆုိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။
တကယ်တော့ သူတုို့စုိုးရိမ်မယ်ဆုိုလည်း စိုးရိမ်စရာပါပဲ။ နော်ဝေးနဲ့မြန်မာဆုိုတာဟာ သမုိုင်းကြောင်းအရ ဘာ မှအဆက်အစပ်မရှိတဲ့အတွက် မြန်မာနုိုင်ငံဆီ နော်ဝေးဘုရင်ကိုယ်တုိုင်သွားဖုို့လုိုအပ်လုို့လားဆုိုပြီး မြန်မာ-နော်ဝေး အတော်များများက မေးခွန်းထုတ်ကြပါတယ်။ နော်ဝေးဆုိုတာ ဗြိတိန်တို့၊ ပြင်သစ်တုို့၊ ဂျာမဏီတုို့လုို မြန်မာနုိုင်ငံနဲ့ အစဉ်အလာအရ သံတမန်ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့နုိုင်ငံမဟုတ်ပါ။ အခုချိန်ထိလဲ နော်ဝေးမှာ မြန်မာသံရုံးမရှိသေးပါ။
ဒါကြောင့် နော်ဝေး-မြန်မာ ဆက်ဆံရေးသမုိုင်းကိုပြောမယ်ဆုိုရင် ၁၉၉၁ မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကုို နုိုဗယ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆုပေးတဲ့အချိန်ကမှ စတင်ခဲ့တာလုို့ဆိုရမှာပါ။ အဲဒီနောက်မှာတော့ ဒီမုိုကရေစီလှုပ်ရှာသူတွေရဲ့ ကိုယ်စား၊ ဒီမုိုကရေစီအင်အားစုတွေရဲ့အသံအဖြစ် DVB ဒီမုိုကရက်တစ်မြန်မာ့အသံကုို စတင်ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီလုိုကူညီမှုတွေကြောင့် နော်ဝေးကို မြန်မာ့လူထုကြားအသိများလာတာပါ။
ဒါက စာရေးသူအပါဝင် ၁၉၈၈ နောက်ပုိုင်းမှ နုိုင်ငံရေးနဲ့ မီဒီယာနယ်ပယ်ထဲရောက်လာသူတွေရဲ့ အမြင်ပါ။ ဒါပေမယ့် NBC နော်ဝေး-မြန်မာကော်မီတီရဲ့ ဘုရင်မင်းမြတ်ထံပေးပုို့ထားတဲ့စာအရဆုိုရင် မြန်မာ့ဒီမုိုကရေစီအရေး၊ မြန်မာ့ လွတ်မြောက်မှုအရေးအတွက်နော်ဝေးက ကူညီခဲ့တာဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နုိုဗယ်ဆုရတဲ့ ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွေ ရောက်မှမဟုတ်။ လွတ်လပ်ရေးမရခင် ဒေါ်စုရဲ့အဖေ သခင်အောင်ဆန်းခေတ်ကတည်းကလုို့ဆုိုထားပါတယ်။
သခင်အောင်ဆန်းကုိုယ်တုိုင် ရဲဘော် ၃ ကျိပ်နဲ့အတူ စစ်ပညာ သင်ဖုို့ မြန်မာနုိုင်ငံကနေ ဂျပန်နုိုင်ငံဆီ (ဂျပန်ပုိုင် တရုတ်နုိုင်ငံ အမွိုင်ကျွန်းဆီ) ခုိုးထွက်စဉ်က ကူညီပေးခဲ့ တာဖြစ်တယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်နေချိန် ၁၉၄၀ သြဂုတ်လ ရ ရက်နေ့မှာ ရန်ကုန်ကနေ အမွိုင်ဆီ သခင် အာင်ဆန်းနဲ့အဖွဲ့ လုိုက် ပါသွားတဲ့ ပင်လယ်ကူးသဘောင်္ဟာ နော်ဝေးနုိုင်ငံသားပုိုင်တဲ့ သဘောင်္ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မြန်မာ့လွတ်မြောက်ရေး၊ မြန်မာ့ဒီမုိုကရေစီရေးအတွက် ဒီလုိုအစဉ်လာကြီးကြီးကူညီခဲ့တဲ့ နော်ဝေးနုိုင်ငံရဲ့ ပေါ်လစီဟာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနောက်ပုိုင်းမှာ လုံးဝ ပုံစံပြောင်းသွားပါတယ်။ (တကယ်တော့ ၂၀၁၀ ရွေးေ ကောက်ပွဲမတုိုင်ခင် နာဂစ်မုန်တုိုင်းကြောင့် လူပေါင်းတသိန်းကျော်သေဆုံးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ နှောင်းပုိုင်း ဒုက္ခသည်တွေကို အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအကူညီပေးခွင့်ရကတည်းက နော်ဝေးရဲ့လေသံ နည်း နည်းပြောင်းစပြုလာတာကို သတိထားမိပါတယ်။) ဒီမုိုက ရေစီအင်အားစုတွေကို ကူညီရေးမှ အသစ်တက်လာတဲ့ အစိုးရကုိုကူညီရေးဖက် ရောက်သွား ပါတယ်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့အဖွဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း နော်ဝေးရောက်လာစဉ်မှာ ကြွေးဟောင်းခရိုနာ ၃ ဘီလီယံ (အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၅၄၀ ခန့်) ကို နော်ဝေအစိုးရက လျှော်ပေး လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ MPC အပါဝင် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်၊ မြေမြှုပ်မုိုင်းပပျောက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေတွက် အင်တုိုက်အားတုိုက် ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်မှတဆင့် သန်းကောင် စာရင်းနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိစ္စတွေကိုလဲကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနုိုင်ငံအပေါ် ဥရောပကချမှတ်ထား တဲ့ စီးပွါးရေးပိတ်ဆုို့မှုတွေလဲ ရုတ်သိမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။
အရင်ကဆုိုရင်တော့ နော်ဝေးဟာ ဒီမုိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်ရေးကိုသာတန်ဖုိုးထားတဲ့အတွက် ဒီလုိုကူညီမှုတွေကနေ ဘာမှပြန်ယူလေ့မရှိပါ။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ နော်ဝေးက အဲဒီစံတွေအတုိုင်းဆက်သွား-မသွား မသေချာတော့ပါ။
ဒီအကူညီပေးမှုတွေ ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ (Telenor) တယ်လီနော ဆက်သွယ်ရေးကုပ္ဗဏီနဲ့ Statoil စွမ်းအင်ကုပ္ဗဏီ တွေက မြန်မာနုိုင်ငံအတွင်း စီးပွါးရေးလုပ်ကုိုင်ခွင့် လုိုင်စင်တွေရအောင် ကြိုးစားခဲ့တာ အားလုံးအသိဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇွန်လအတွင်းမှာတော့ တယ်လီနောဟာ အူရဒူးနဲ့အပြိုင် မြန်မာနုိုင်ငံမှာ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိုင်ခွင့် လုိုင်စင်ရသွားခဲ့ပါတယ်။ Statoil ကလဲ ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ကိုင်ခွင့် လုိုင်စင်ရထားပြီးပြီ လုို့ သိရပါတယ်။ ဒီလုိုအခြေနေမှာ နောက်ထပ် ကုပ္ဗဏီ ၃၅ ခုကကုိုယ်စားလှယ်တွေ ဘုရင်မင်းမြတ်နဲ့အတူလုိုက်ပါ လာတယ်ဆုိုတော့ နော်ဝေးရဲ့ စီးပွါးရေးက မြန်မာမြေပေါ် ဒီထက်မကများလာတော့မယ်ဆုိုတာ ထင်ရှားနေပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခြားတဖက်ကနေ စဉ်းစားမယ်ဆုိုရင်လဲ မြန်မာနုိုင်ငံမှာ လက်ရှိကြီးစုိုးနေတဲ့ တရုတ်နဲ့ တခြားအိမ်နီးချင်း နုိုင်ငံတွေက ကုပ္ဗဏီတွေ၊ စစ်တပ်ပုိုင် ဦးပုိုင်ကုပ္ဗဏီ၊ ခရုိုနီပုိုင်ကုပ္ဗဏီတွေနဲ့စာရင်တော့ နော်ဝေးအပါဝင် အနောက် ဥရောပကုပ္ဗဏီတွေက နုိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွန်းတွေကို အလေးထားတာကြောင့် ဒီလုိုဝင်လာတာကို ကြိုဆုိုသင့်နေ ပြန်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ စုိုးရိမ်ဘွယ်ကောင်းတဲ့အချက်တခုကတော့ စီးပွါးရေးကုပ္ဗဏီတွေနဲ့ စစ်တပ်ရဲ့စဉ်းစားပုံ သွားတူနေတဲ့ အချက်ပါ။ အဲဒါက ဘာလဲဆုိုတော့ နယ်မြေ တည်ငြိမ်ရေးကုို ဦးစားပေးရေးဆုိုတာပါ။ ဆုိုလုိုတာက ဒီမုိုကရေစီ အရေး၊ လူ့အခွင့်ရေးဆုိုပြီး အနောက်နုိုင်ငံတွေက အော်နေပေမဲ့ တကယ်တန်းစီးပွါးရေးလုပ်တဲ့အခါမှာတော့ အဲဒီအခွင့်ရေးတွေထက် နယ်မြေတည်ငြိမ်ရေးကိုသာ ဒီကုပ္ဗဏီတွေက အဓိကဦးစားပေးတာလုို့ဆုိုပါတယ်။
ဆုိုလုိုတာကတော့ မြန်မာနုိုင်ငံမှာနယ်မြေတည်ငြိမ်ဖို့အတွက် စစ်တပ်က အရေးကြီးတဲ့နေရာကပါဝင်နေမှဖြစ်မယ်၊ စစ်တပ်ကြီးစိုးမှုကိုလျော့ချလုိုက်ရင် နယ်မြေမတည်မငြိမ်ဖြစ်လာနုိုင်တဲ့ဆုိုတဲ့ တွက်ဆမှုမျိုးပါ။ တနည်းအားဖြင့် ဒီမုိုကရေစီအခွင့်အရေးအပြည့်အ၀ရဖုို့ထက် တုိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ပြီး စီးပွါးဖွံဖြိုး တုိုးတက်လာရင် အားလုံး အုိုကေ သွားမှာပါဆုိုတဲ့စဉ်းစားချက်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက် ဒါဟာ စိုးရိမ်ဘွယ်ကောင်းတဲ့ စဉ်းစားချက်တခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မြန်မာ့နုိုင်ငံရေးအသွင်ကူးပြောင်းမှုဟာ အလွန်အရေးကြီးတဲ့အနေထားမှာရောက်နေတဲ့အတွက်၊ အထူး သဖြင့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖုို့တနှစ်တောင် အချိန်မကျန်တော့တဲ့အတွက် ဒီလုိုအခြေနေမျိုးမှာ ဘက်တဖက် ဖက်ကုို ရွေးပြီးထောက်ခံမိတာမျိုး မဖြစ်စေဖုို့ နော်ဝေးအစိုးရအနေနဲ့အထူးသတိထားသင့်တယ်။ ဒီရွေးကောက်ပွဲ နောက်ပုိုင်းမှာ ဒီမုိုကရေစီအခွင့်ရေးကိုအလေးထားတဲ့ အစိုးရတခုခုတက်လာနုိုင်တဲ့အတွက် အရင်နှစ် ၂၀ ကျော်က အားပေးခဲ့သလုိုမျိုး ဒီမုိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်ရေးလှုပ်ရှားတဲ့လူတွေဖက်ကုို ပုိုမုို အားပေးနုိုင်အောင် အခုကတည်းက နော်ဝေးဖက်က စဉ်းစားထားဖုို့လိုတယ်လို့ အကဲခတ်တွေက ထောက်ပြနေပါတယ်။
အနှစ်ပြန်ချုပ်ရမယ်ဆုိုရင်တော့ နော်ဝေးဘုရင်နဲ့နော်ဝေးအစိုးရဟာ အစဉ်အလာကြီးလှတဲ့ နုိုဗယ်ဆု၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ လူ့အခွင့်ရေးစံချိန်စံညွန်းတွေပေါ်မှာသာ ခုိုင်ခုိုင်မာမာဆက်ရပ်သင့်ပါတယ်။ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းဆုိုတာဟာ အဲဒီ ဒီမုိုကရေစီစံချိန်စံညွန်းမှီတဲ့ နုိုင်ငံတခုဆီသွားနုိုင်ဖို့အတွက် အထောက်ပြုစေရေးလမ်းကြောင်းတခုသာ ဖြစ်သင့်ပါ တယ်။
အဲဒီလုိုမဟုတ်ပဲ တရုတ်နဲ့နော်ဝေးအကြားဆက်ဆံရေး ပုံစံပြောင်းသလုိုမျိုး ဆော်လမွန်ငါးတွေ တရုတ်နုိုင်ငံဆီ မတင်ပုို့ရမှာစုိုးလုို့ နုိုဗယ်ဆုရှင် တိဘက်ဘုန်းတော်ကြီးတလုိုင်းလာမားကုို နော်ဝေးအစိုးရကလက်မခံဘူးဆုိုတာ မျိုးအထိပြောင်းသွားတာမျိုးမဖြစ်သင့်ပါ။ အဲဒီလုိုပါပဲ မြန်မာနုိုင်ငံမှာလဲ တယ်လီနောဖုန်းတွေမရောင်းရမှာစုိုးလုို့ နုိုဗယ်ဆုရှင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဒီမုိုကရေစီအင်အားစုတွေကို လက်မခံဘူးဆုိုတဲ့အဆင့်ထိ ရောက်မသွား အောင် ဒီမုိုကရေစီအင်အားစုတွေက သတိပေးဖုို့တာဝန်ရှိနေပါတယ်။
နော်ဝေးမှာ မြန်မာသံရုံးမရှိပေမဲ့ မြန်မာနုိုင်ငံသား ၃၀၀၀ (သုံးထောင်) ကျော် နော်ဝေးမှာရှိနေပါတယ်။ ၁၉၈၈ ဒီမုိုကရေစီအရေးနဲ့ဆက်စပ်ရောက်လာသူတွေဖြစ်တဲ့ ဒီလူတွေရဲ့ ဆန္ဒကုိုလဲ နော်ဝေးအစိုးရရော၊ မြန်မာအစိုးရ ဖက်ပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လုိုလာပါတယ်။ ဒီလူတွေမြန်မာပြည်ဖွား နော်ဝေးနုိုင်ငံသားတွေဖြစ်တာ ကြောင့် အစိုးရ ၂ ခုစလုံးနဲ့သက်ဆုိုင်နေပါတယ်။
မြန်မာနုိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာ ဒီလူတွေပါဝင်ကြဖို့၊ အနည်းဆုံးအဆင့်တော့ တုိုင်းပြည်ထဲပြန်လာပြီး လေ့လာ ကြဖုို့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကိုယ်တုိုင် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလအတွင်းက အော်စလုိုမြို့ မြန်မာလူထုနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာ တရားဝင်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ စာရေးသူအပါဝင် ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေ ပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်တာအတွင်း လေ့လာရေးအဖြစ် ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ နော်ဝေးမှာနေထုိုင်တဲ့ အဆုိုတော်ကုိုမွန်းအောင်ကုို ဘန်ကောက်ရှိ မြန်မာ သံရုံးက ဗီဇာ မပေးဘူးဆုိုပြီး ငြင်းဆုိုလိုက်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စတွေအတွက် မြန်မာအစိုးရဖက်ကနေ နော်ဝေးဘုရင်ကို ဘယ်လိုရှင်းပြမှာလဲ။
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်သေချာတာတခုကတော့ ဒီနေ့ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေ နော်ဝေးကိုမြင်တဲ့အမြင်နဲ့ ကျနော်တုို့ ၈၈ မျီုးဆက်တွေ နော်ဝေးကိုမြင်တဲ့အမြင်တွေ ကွာခြားကောင်းကွာခြားသွားနုိုင်ပါတယ်။ နော်ဝေးဟာ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်ကုို နုိုဗယ်ဆုပေးခဲ့တဲ့နုိုင်ငံ၊ DVB နဲ့ ဒီမုိုကရေစီအင်အားစုတွေကို အပြည့်အ၀ထောက်ခံအားပေးခဲ့တဲ့ နုိုင်ငံအဖြစ် ၈၈ -မျိုးဆက်ကမြင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ ကျော်က ဒီမုိုကရေစီအရေး ရုန်းကန်တုိုက်ပွဲဝင်မှုတွေကုို အသေချာ မသိလုိုက်တဲ့ ဒီနေ့ ဆယ်ကျော်သက် ရန်ကုန်က လူငယ်တွေတော့ နော်ဝေးဆုိုတာ တယ်လီနော တယ်လီဖုန်းကုပ္ဗဏီရှိတဲ့နုိုင်ငံ၊ စီးပွါးရေးထွန်းကားတဲ့နုိုင်ငံတခုအဖြစ်သာ မြင်သွားရင် နော်ဝေးရဲ့ လူ့အခွင့်ရေး၊ ဒီမုိုကရေစီအရေး စံချိန်စံညွန်းနဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကုို ထိခုိုက်မှုရှိလာနုိုင်ပါကြောင်း တင်ပြလုိုက်ရပါတယ်။ ။